क्यालिफोर्नियाई स्काई - रसायनिक सूपको कढर - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र बी2बी बजार समाचार
क्यालिफोर्नियाई स्काई - रसायनिक सूपको कढर
सम्पादकको पिक सेप्टेम्बर 14, 2020 सेप्टेम्बर 14, 2020 माधवी वडायागिरि क्यालिफोर्निया, सम्पादकको पिक, समाचार लेख, राजनीति
वाइल्ड फायर क्यालिफोर्नियाको परिदृश्यको एक प्राकृतिक हिस्सा हो।
लामो र गम्भिर सुख्खा मौसमले वनस्पतिमा ओसिलो तनाव बढाउछ र जsts्गलहरूलाई गम्भीर ज wild्गलको आगोको लागि बढी संवेदनशील बनाउँछ।
आगोको मौसमको लम्बाई राज्यभरि वन्य आगोको सीमामा बढेको अनुरूप देखिन्छ।
दक्षिणी क्यालिफोर्नियाको बासिन्दाको रूपमा, तपाईंले नोट गर्नु भएको पहिलो चीज धुँवा, धुवाँ, खैरो-सुन्तला रंगको स्काई हो। बादलले बादलले तपाईंलाई वर्षाको बादल हो भनेर सोच्न बहकाउन सक्छ। तर ती छैनन्! ती धुवाँले भरिएका बादलहरू हुन् क्यालिफोर्नियाको रगको आगोले गर्दा। मेरो पूर्ण त्रासको लागि, मैले मेरो कारको लेपमा कालिखुट्टे भरिएको कणहरू भेट्टाएँ। टिभी च्यानलहरूमा मौसम फोकलले अस्वस्थ हावाको बारेमा लगातार सतर्क गराउँछ।
क्यालिफोर्नियाको जंगल आगोको ज्वालाले मानिस, वन्यजन्तु र सम्पत्तीलाई गम्भीर समस्याका रूपमा खडा गर्‍यो, उनीहरूले छोड्ने धुवाँले अझ ठूलो क्षेत्रका लागि स्वास्थ्य खतरा निम्त्याउँछ।
पश्चिमी क्यानाडाका वन्यजन्तुहरूको अध्ययन गर्ने एक अनुसन्धानकर्ताले बताए अनुसार जंगलमा आगोको धुवाँ पिउनु भनेको यसको मोटाईको आधारमा दिनको दुई थोरै सिगरेट पिउनु बराबर हो। अल्बर्टा विश्वविद्यालयमा नवीकरणीय संसाधन विभागका प्राध्यापक माइक फ्लानिगानले भने, धुवाँ “रसायनिक सूप” जत्तिकै छ। जुन फोक्सोमा फस्न सक्छ र स्वास्थ्य समस्याहरूको संख्या निम्त्याउन सक्छ.
क्यालिफोर्नियाको जंगल आगोको ज्वालाले मानिस, वन्यजन्तु र सम्पत्तीलाई गम्भीर समस्याका रूपमा खडा गर्‍यो, उनीहरूले छोड्ने धुवाँले अझ ठूलो क्षेत्रका लागि स्वास्थ्य खतरा निम्त्याउँछ। धुवाँले कार्बन मोनोअक्साइड मात्र समावेश गर्दैन, जुन विषाक्त हो, यसले सानो कालि कणहरू पनि समावेश गर्दछ जुन मान्छे (र अन्य पशुहरूको) फोक्सोमा उनीहरूको मार्गमा काम गर्न सक्छ, जसले श्वासप्रश्वासको चिन्ता र स distress्कट निम्त्याउँछ, धेरै क्षेत्रमा वायुको गुणस्तर तहसम्म बिग्रिएको छ। वातावरणीय संरक्षण एजेन्सीलाई "अस्वस्थ" को रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ।
प्रत्येक क्यालिफोर्नियाली आगो हावा र उच्च तापमान द्वारा संचालित हुन्छ; दक्षिणी क्यालिफोर्नियाको स्क्रबल्याण्ड, ज forest्गल र मरुभूमिको बीचमा ब्लेज चाँडै बढ्छ। वाइल्डफायरले रेकर्डमा कुनै बर्ष भन्दा २०२० मा बढी जग्गा जलाइसकेको छ। वर्षको शुरूदेखि यता राज्यमा 2020..१ मिलियन एकड भन्दा बढी जलेको छ। अर्को रेकर्ड। २० सबैभन्दा ठूला आगलागीहरू मध्ये छ वटा अहिले भइरहेको छ। २०१२ पछि १० सबैभन्दा ठूलो आगलागी मध्येका नयाँ। २०० 3.1 पछि २० सबैभन्दा ठूला आगो मध्ये सेभेन्टिन।
एप्पल फायरले कालो बनायो र इरियरीले ल्याण्डस्केपलाई उजागर गर्‍यो, ती सबै बाँकी रहेका पातहरू, पात-कम रूखहरूका कंकाल थिए। जुलाई ,१,२०२० मा एउटा गाडीले चेरी उपत्यकाको उत्तरी भागमा रहेको कार्बनबाट निकालिदियो र एप्पल फायरलाई प्रज्वलित गर्‍यो, जुन 31,2020 33,000,००० एकड भन्दा बढीमा परिणत भयो, क्यालिफोर्नियाको क्षेत्र दोस्रो दशक भन्दा बढीमा देखेको थियो।
एल डोराडो आगो लिंगको पार्टीले शुरू गरेको थियो, एक पायरोटेक्निक उपकरणले आगो प्रज्वलित गरेपछि। सेप्टेम्बर ,,२०२० मा यसले सान बर्नार्डिनो राष्ट्रिय वनलाई जलायो, ​​क्यालिफोर्नियाको। यो आगोको रेकर्डले गति बढायो र १०० डिग्री फरेनहाइट र कम आर्द्रताको कारण तापक्रमले हड्डी सुक्खा ईन्धनलाई जलायो।
फ्याबियस म्याक्सिमसका अनुसार, "मानव क्रियाकलापका कारण हुने इग्निसनहरू इकोसिस्टम र अर्थशास्त्रको समग्र आगोको जोखिमको एक पर्याप्त चालक हुन्। मानव-सुरु भएको वन्य आगोको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा जागरूकता र ब्यवस्थापन बढाउने कार्यहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाको नीतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ आगोको जोखिम र सम्बन्धित जोखिमहरूलाई कम गर्न "।
क्यालिफोर्निया, ओरेगन र वाशि Washington्टनले ऐतिहासिक अनुपातको जfire्गल आगोको मौसम सहन गरिरहेका छन्। अत्यन्तै तातो गर्मी र सुख्खा हिउँदले गर्दा "टिन्डर-ड्राई बोटबिरुवा" भएको छ। बराक ओबामाले अमेरिकाको पश्चिममा उब्जने वन्य आगो र मौसम स between्कटबीचको सम्बन्ध रेखांकित गरेका छन्उल्लेख गर्दै: "हाम्रो ग्रहको रक्षा गर्ने काम मतपत्रमा छ।"
वाइल्डफायरहरूले हानिकारक वायु प्रदूषकहरूको दायरा उत्पादन गर्दछ।
वाइल्डफायरहरूले हानिकारक वायु प्रदूषकहरूको दायरा उत्पादन गर्दछ। हानिकारक सामग्रीहरु:
कण पदार्थ (प्रधानमन्त्री): अपेक्षाकृत छोटो अवधिको प्रदर्शनहरू (घण्टा देखि हप्ता) को लागि जनसाधारणले अनुभव गरेको लागि ज wild्गल आगोको धुवाँबाट मुख्य चिन्ताको मुख्य प्रदूषक। धुवाँबाट कणहरू एकदम सानो हुन्छन् (२. mic माइक्रोमीटर र सानोको व्यासको साथ), र फोक्सोको गहिरा भागमा साँस लिन सकिन्छ।
कार्बन मोनोअक्साइड (सीओ): रंगहीन, गन्ध रहित ग्यास आगोको धुम्रपान चरणहरूमा उच्च तहमा हुन्छ, विशेष गरी आगो नजिक। CO मुख्यतया मानिसहरुलाई जोखिम हुन्छ (फायर फाइटरहरू जस्तो) जसले धुम्रपान गर्ने क्षेत्रहरूको नजिक काम गर्दछ।
सीडीसीले केहि उपयोगी सल्लाह दिएका छन कसरी यी वन्य आगोको दौरान आफूलाई सुसज्जित गर्न मा। क्यालिफोर्नियामा वन्य आगोले जलिरहेको छ, धुवाँबाट अस्वास्थ्यकर हावाले राज्यको धेरै भागहरू बन्दै गएको छ, COVID-१ Pand महामारीको साथ मिलेर, आगोले जटिल जोखिम निम्त्याउँदैछ जुन धेरै बर्षदेखि तयार पारिएको छ.
उपग्रह र एयरक्राफ्टहरूमा पृथ्वी अवलोकन उपकरणहरूले हालको आगोलाई म्यापि are गर्दैछ, भूमिमा एजेन्सीहरूलाई डाटा उत्पादनहरू प्रदान गर्दछ जुन आपतकालिनलाई प्रतिक्रिया गर्दैछ। नासा, जेपीएल र जीएसएफसीका अनुसन्धानकर्ताहरूले उपग्रह डेटाको विश्लेषणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए र नासा प्रकोप कार्यक्रम र नासा स्वास्थ्य तथा एयर क्वालिटी अप्लाइड साइंसेज टोलीले क्यालिफोर्निया नेशनल गार्डका स्टकधारकहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा आगोको प्रभाव ट्र्याक गर्न सहयोग पुर्‍याए।
वायु प्रदूषण वातावरण सांप्रदायिक समाचार Wildfires
डिमान्डले उच्च प्रदर्शन लिक्विड क्रोमैटोग्राफी (HPLC) मार्केट उच्च ड्राइभ गर्दछ
जापान - योशिहीड सुगा एबेको उत्तराधिकारी चयनित